Mugadziri - Shuiyuan Nyowani Energy Technology Co, Ltd.
Shenxian Shuiyuan Nyowani Energy Technology Co, Ltd. hwagadzwa muna 2000, iri Shandong dunhu, tiri mugadziri fekitari nyanzvi zvibereko Dibenzoylmethane (DBM) uye furfural. Seimwe yenyika huru kugadzirwa kwehunyanzvi Dibenzoylmethane (DBM) fekitori ine pagore inokwana zviuru gumi metric matani, semumwe wevanyanzvi vepasi rose vanogadzira furfural ine pagore kugona 30,000 metric matani. Tine mana ebazi zvigadzirwa.
Iyo fekitori ye83,916 mativi emamita kusanganisira 80,000 mativi emamita workshop space.Company ine vanopfuura vashandi ve200, yakasimba simba rehunyanzvi, ine nyanzvi inobata mukutsva kwechigadzirwa chitsva uye budiriro timu rehunyanzvi, uye chengetedza kubatana kwepedyo nevazhinji vekumba vanozivikanwa kwesainzi masangano , isu tinoteerera kune pfungwa yesainzi uye tekinoroji yekuvandudza uye kuchengetedza kwezvakatipoteredza nyowani isiri chepfu PVC yekubatsira kupisa inodzikamisa Dibenzoylmethane (DBM) uye furaldehyde uye furfural zvigadzirwa kugadzirwa nekambani yekutengesa inokwana matani emakumi mana, kambani ine nyika yepamberi tekinoroji kugadzirwa mutsara uye wepasi rose weDibenzoylmethane (DBM) zvigadzirwa zvekugadzira, mhando yechigadzirwa yasvika padanho repasi rose.
Izvo zvigadzirwa zvinonyanya kushandisa methanol uye acetic acid kubva muchibage cobs, anoshandiswa mukugadzira Dibenzoylmethane uye furfural, zvakasiyana siyana zvekushandisa, kunyanya kune furfural doro resin yemishonga uye yakanaka chemakemikari indasitiri munzvimbo. Zvigadzirwa zvevhu zvinogona kushandiswa mukugadzira mishonga, furfuryl doro, zvinonhuwira, zvinwiwa, resini uye zvimwe zvigadzirwa.
Dibenzoylmethane inonyanya kushandiswa seyakagadzika yepurasitiki mumidziyo yemabhodhoro emvura, maseti ekumisira, pombi dzekushandura, nezvimwewo Parizvino, ine huwandu hwekugadzira hwegore rose hwematani zviuru gumi, Zvinopfuura 95% zvezvigadzirwa zvinotumirwa kuUnited States, nyika dzeEurope, South Korea, Japan, Britain, Mexico, nezvimwewo Tine vatengi munyika dzinopfuura makumi mana.kambani yedu yave mutungamiri muDibenzoylmethane uye furfural indasitiri muChina